रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा पुगेर भेटेपछि नायिका श्वेता खड्काले भनिन्- न्याय नमरोस् है ! - Kendrabindu Nepal Online News
रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा पुगेर भेटेपछि नायिका श्वेता खड्काले भनिन्- न्याय नमरोस् है !
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ०६:४४
यतिबेला पत्रकार शालिकराम पुडाशैनीको आत्महत्या र रवि लामिछाने लगायत ३ जनाको प्रहरी हिरासतको विषयले सामाजिक संजाल मात्र तताएको छैन , सडक पनि उस्तै तताएको छ । ५ दिनको समय राखेर रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेको प्रहरीले पुनः ५ दिनको समय थपेर आगामी शनिबार सम्म अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । प्रहरी हिरासतमै रहेका रवि लामिछानेलाई भेट्न उनका शुभचिन्तकहरु चितवनमै पुग्ने गरेका छन् । यसैक्रममा नायिका श्वेता खड्का पनि हाल चितवनमा छिन् । उनले हिजो रवि लामिछानेलाई भेट गरेपछि आफूलाई लागेको कुरा सामाजिक संजाल फेसबुकमा यसरी लेखेकी छिन् ।
यो अँध्यारो केहिबेरको लागि मात्र हो , भोली बिहान फेरी सूर्य उदाउने छ र नयाँ दृष्य छर्लङ्ग देखिनेछ । आदरणीय रवी लामिछाने दाईसँग आज भरतपुर कारागारमा भेट्दा उहाँले बोलेको यो वाक्यले मेरो मन छोयो ।
कसुर सावित नभएतापनि कसुरवार सरह जीवन यापन गरिरहेका रवी दाइसँगको २ मिनेटको त्यो भेटमा उहाँले मेरो स्वास्थ्य अवस्था मात्र होईन सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधिन माझी बस्तिको बारेमा पनि सोध्न भ्याउनुभयो ।
म, रवी दाईसँग जेल भित्र २ मिनेटको भलाकुसारी गरिरहँदा बाहिर उनै रवी दाईको समर्थनमा घन्किरहेको केहि नाराहरुले हामी बिचको संवादमा अवरोध खडा गरिरहेको थियो । ३६ डिग्रीको उग्रतापमा गुन्जिरहेको , हाम्रो देश, हाम्रो रवी , प्राण भन्दा प्यारो छ , भन्ने आवाजलाई म स्पस्ट सुनिरहेको थिएँ । त्यही आवाजका बिचमा हाम्रो संवाद चलिरहेको थियो ।
निश्चित अवधिभित्र, समुहमा भेट्नुपर्ने नियमानुसार हाम्रो ठुलो टोली रवी दाईलाई भेट्न गएका थियौं । रवी दाईलाई कैदीको रुपमा टाढैबाट पहिलो दृष्य मेरो आँखामा पर्दा मनमा चसक्क काँडा बिझेसरी भएको थियो ।
त्यती खेरै मैले सम्झें, केहि बर्ष अगाडी मैले रवी दाईको बारेमा सम्प्रेषण गरेको लेख । रबी लामिछाने जस्ता न्यायिक ब्यक्तिको पक्षमा लेखिएको मेरो त्यो लेखको शिर्षकभित्र लुकेको भावलाई नपढी धेरै ब्यक्तीले मलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । मलाई अपाच्य हुनेखालका अपशब्दहरु प्रयोग गरिए । तर म , सधैं न्याय र सामाजिक हितको पक्षमा उभिने एउटी अवला नारी । मैले आजसम्म कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिइनँ र कुनै ब्यक्तिलाई कुनै एउटा राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको रुपमा ब्यवहार वा सोही अनुरुपको संगत गरिन ।
मलाई मानवियता भन्दा कुनै दल , धर्म वा बर्ग ठूलो छ जस्तो कहिल्यै महुसुस भएन । जतिखेर मैले रवी लामिछाने दाई जस्तो असल ब्यक्ती सतिले सरापेको यो देशमा काम छैन र उहाँलाई टुँडिखेलमा लगेर फाँसी दिईनुपर्छ भन्ने लेख सम्प्रेषण गरेको थिएँ , त्यो बेला नेपाली काँग्रेसको सरकार थियो र मलाई त्यसबेला काँग्रेसका झोलेहरुले नेकपा एमाले या माओवादीको दिएका थिए । आज म , रवी दाईलाई चितवनमा भेटेर फर्किरहँदा यतिखेर नेकपाको सरकार छ । अब म ढुक्क छु , मलाई नेकपाका केहि झोले कार्यकर्ताहरुले अब नेपाली काँग्रेस वा राजावादी दलको वात लगाउनेछन् । मलाई कहिले काँग्रेस , कहिले एमाले या माओवादीका साथै राजावादी दलको सक्रिय कार्यकर्ताको वात लाग्नु कुनै नौलो पनि रहेन । यदी राम्रो मान्छेलाई हाम्रो मान्छेको रुपमा लिंदा कुनै दल वा वर्गको आरोप लाग्छ भने म त्यो आरोपलाई सहर्ष स्विकार गर्न तयार रहन्छु । मलाई आरोपका कुनै कुराहरुले फरक पर्ने वाला छैन । म न्यायप्रेमी नारी , म स्वतन्त्रताको पक्षधर । मलाई निष्पक्ष र निस्कपट छानविनको अन्तिम निर्णय मान्य हुनेछ ।
सालिकराम पुडासैनीकी बिधुवी श्रीमती सम्झना पुडासैनीको उजाड सिउँदो र रवी लामिछाने दाईकि निर्दोष श्रीमती निकिता पौडेलले पनि न्याय पाउनु पर्छ । न्याय नडगमगाओस् । जे भएको हो त्यही देखियोस , जे वितेको हो त्यही लेखिओस् । न्यायलय प्रतिको हाम्रो आस्था, बिस्वास र भरोसा ओइलाएर नजाओस् । मेरो कामना ।
नायिका श्वेता खड्का, न्याय नमरोस् है, प्रहरी हिरासत, रवि लामिछाने
Prevकृषि विकास बैंकको नाफा ५७ करोड
नेकपा सचिवालय बैठक आज पुनः बस्दैNext